bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at June 3, 2019
Ebe E Si Nweta - The National.ae
Emirates nwere otu n'ime ọnụ ọgụgụ mpụ kachasị ala n'ụwa!
Dubai nwere otu n'ime ọnụego kachasị njọ n'ụwa
Ọ dị ịtụnanya Dubai nwere otu n'ime iwu mpụ kachasị dị n'ụwa, na 2018 ka a họọrọ obodo nke asatọ kachasị dịrị nchebe n'ụwa. Industrylọ ọrụ nchekwa ụlọ ọrụ nchekwa amapụtara nke mpụ ahụ ụzọ edemede isii Mpụ ndị a gụnyere izu ohi, izu ohi n'ike, izu ohi n'ụlọ, igwu wayo, mwakpo mmekọahụ na mmegbu, yana mmebi iwu.
Dị ka ọ bụla Gulf News, Dubai uweojii kwuru na mpụ na Dubai na-belata 15% n'oge 2017. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ nke ịṅụ ọgwụ ike mụbara pasent asatọ. Isi-General Abdullah Khalifa Al Merri, onye isi na-elekọta ndị uweojii Dubai, kwuru na ọ bụ ike na-edozi 86% nke ikpe ikpe.
Ebe E Si Nweta: Ụlọ ọrụ Weebụ ndị uwe ojii Dubai
Mba ndị Arab na-abaghị uru na mpụ, nke kachasị elu na nchekwa na nyocha ụwa,
Ndị uweojii anyị na 2020 na-ebu ụgbọ elu 'na ụgbọala ndị uwe ojii kachasị elu n'ụwa' - Anyị nọ ugbu a na MGBE AHỤ! Mgbasa ozi SUV a na-ewuli elu gosipụtara ọhụụ ọhụrụ, nke na-eme ihe ike na ịsụ ụzọ ihuenyo ọdịdị ihu!
Ndị uwe ojii Dubai
Ebe E Si Nweta - National.ae
Mba Arab na-eleda anya na mpụ, nke kachasị na nchekwa na nyocha ụwa na UAE
Mba ndị Arab na-abaghị uru na mpụ, nke kasị elu na nchekwa na nyocha ụwa na UAE
Ọgwụ ndị metụtara ọgwụ ọjọọ ada
Ihe gbasara ọgwụ ọjọọ emeela ka afọ 5 kwụsịrị, site na 15 site na 100,000 bi na 14.3 na 2017, mgbe mpụ ndị mmadụ na-azụ ahịa na-edeba ọnụ ala kachasị elu n'ụwa, na-esite na 0.2 na 2013 ruo 0.1 na 2017.
Al Mansouri kwuru na ndị uwe ojii Dubai bụ otu n'ime ndị agha mbụ na UAE iji guzobe ngalaba na-emegide mpụ, ma e wezụga ndị otu nchekwa pụrụ iche iji nyochaa oghere dị iche iche na ịchọpụta oghere dị nchebe - dịka ụlọ gbahapụrụ na ụgbọala - gburugburu obí eze ma kọọ banyere ya. Ndị uwe ojii na-emezi ihe iji gbochie ụdị mpụ ọ bụla na mpaghara ndị a.
Onye uwe ojii ahụ kwuru na ndị isi nchekwa na Dubai na-arụ ọrụ dịka atụmatụ ọdịnihu ga-adị na nchekwa, na-eme ka ọ bụrụ nke kachasị nchebe ebe Na ụwa dịka ọ dị n'ihe ngosipụta niile, dị ka mmelite ntụkwasị obi na-enweghị atụ na ịgbanwe ụdị echiche ndị ọrụ uwe ojii.
N'agbanyeghi mmepe ngwa ngwa nke ndi agha, ndi oru uweojii na Dubai na-aru oru iji gbochie mmebi iwu nke mba ndi na emetụta UAE, dika ndi ogwu. Iwu iwu na mba a bụ otu n'ime ụwa kachasị ike, na-eme ka ndị na-anwa iji aka ya rụọ ọrụ nchebe, Al Mansouri kwuru.
Ndị uweojii na-ahụ maka uwe ojii nke Dubai
Ndị agha Russia na-agba ụgbọ ala na-efe efe Bugharịa. Igwe mmiri ahụ ga-ekwe ka ndị uweojii nyochaa okporo ụzọ na ebe buru ibu ma banye ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ na-anọ otu ma nwee ike ịgba ọsọ maka minit 30-40.
Ụgbọala ahụ nwekwara ike izipu ndepụta vidiyo ndụ. Ndị uweojii na-ahụ maka uwe ojii na-etinye nkwụ ụgbọ elu 20 na-efe efe n'ụgbọala ahụ n'agbanyeghị na ha chere na ya nwere ike ofufe ọbụna karịa n'ọdịnihu. Ha na-atụ anya ịmalite iji hoverbikes n'ime afọ abụọ sochirinụ.
Ọ bụ nnụnụ, ọ bụ ụgbọelu, ọ bụ ndị uweojii na-ekpo ọkụ! Ndị uweojii nọ na Dubai na-emegharị ule.
Anyị na-edozi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke ikpe ndị omempụ!
Dubai nwere otu n'ime ọnụego mpụ kasị elu n'ụwa. Ụlọ ọrụ nchebe ụlọ ọrụ nchekwa ahụ wepụtara mpụ ahụ n'ime ụzọ isii. Mpụ ndị a gụnyere ịzu ohi, ohi ohi, nsị ụlọ, aghụghọ, ịlụ ọgụ na mmegbu, na mpụ ndị omempụ.
Dị ka ọ bụla akụkọ gulf, Dubai uweojii na-ekwu na mpụ na Dubai na-belata 15% karịa afọ gara aga. Otú ọ dị, ikpe ndị omekome mụbara site na 8% Isi-General Abdullah Khalifa Al Merri, bụ ndị isi na-ahụ maka ndị uweojii na Dubai, kwuru na ọ bụ ike na-edozi 86 pasent nke ikpe ikpe. Ndị uweojii na-ekwu na anyị nọ n'azụ ndị omempụ na n'ihi na ọnụego mpụ na-arịwanye elu ngwa ngwa. Dị ka ọ bụla n'akwụkwọ akụkọ Khalij Times, e meela ka ọnụ ọgụgụ dị njọ nke ime ihe ike na 38% n'ime afọ ise gara aga.
Ebe E Si Nweta: https://www.dubaipolice.gov.ae/
Ndị ọrụ nchekwa na Dubai na-arụ ọrụ 24h!
Edere edemede ahụ maka Ụlọ ọrụ Dubai City nke Amardeep Brar dere. Biko jikọọ m na Linkedin.
Dubai City Companylọ ọrụ na-enye ezi ugbu a nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ n'ime United Arab Emirates ya na asusu gi.